Kungani unohlu lwamakheli? | Database lakamuva Lokuposa
Ikhaya » I-imeyili Database Blogs » imeyili Marketing » Kungani unohlu lwamakheli?
Uhlu lwakho lokuposa luyimpahla ebaluleke kakhulu, ngoba kuyindlela eqondile kakhulu neqondile yokuxhumana nabafundi bakho futhi bungobudlelwano obujulile kakhulu, ubuso nobuso nezithameli zakho. Izinga lokunakwa umuntu ofunda i-imeyili azokunikeza lona liphezulu kakhulu, lizuzisa kakhulu ibhizinisi lakho kunalokho ongakuthola kubhulogi, lapho kufanele uncintisane nokuphazamiseka okuningi.
Lapho uthumela i-imeyili kumuntu futhi lo muntu enquma ukuwufunda, kulokhu unokuxhumana okuqinile. Uma uzama ngandlela thile ukuthengisa insizakalo noma umkhiqizo kulo muntu, kulula kakhulu ukukwenza esiteshini se-imeyili.
Ukumaketha nge-imeyili akuyona isilingo
Eqinisweni, isiteshi se-imeyili empeleni siyisiteshi esincane esilinganiselwe sakho konke lokhu ukunyakaza kwe2.0…
Akekho okhuluma ngokukhangisa nge-imeyili kepha uma sibheka izinombolo, isiteshi esizuzisa kakhulu kukho konke okungatholakala ukuthengisa nge-imeyili, phambili kwamasu we-SEO (ukubeka isikhundla ezinjini zokucinga) nezikhathi ze-1,000 ngaphambi kwayo yonke inzuzo ungangena ezingosini zokuxhumana nabantu. Angikhulumi ukukhuluma, ngikhuluma ngokuthengisa.
Kepha ukumaketha nge-imeyili yisiteshi esinenzuzo kunazo zonke
Uma ngempela uhlose ukuthuthukisa ibhizinisi elinobukhona be-on-line elisebenzisela izinhloso zebhizinisi lakho, kufanele usethe uhlu lokuposa. Uhlu lwakho lokuposa luyis database sebhizinisi lakho, amakhasimende akho angaba khona.
"Imali isisohlwini lwakho lwamakheli", yilokhu amaMelika ajwayele ukukusho: "imali isohlwini" futhi ngingasho ukuthi imali isisohlwini lwamakheli futhi ngaphezu kwakho konke, emandleni akho okuthuthukisa ubuhlobo obuseduze kakhulu ubudlelwane nabafundi bakho, ngokususelwa ekunikeleni kwenani.
Ngakho-ke ukufaka uhlu lwakho lokuposa kuyimpahla ebaluleke kakhulu yebhizinisi lakho elincane.
← Ukumaketha nge-imeyili: izibonelo zezinkinga ezikhulisa isilinganiso sokuvula
YINI UKUFAKA EMAIL →